Maxay iskaga mid yihiin saacadaha, sabuurada iyo mashiinada warshadaha? Dhammaantood waxay ku tiirsan yihiin jaangooyooyin si ay u ilaaliyaan dhaqdhaqaaqooda wareega ee wareega. Si kastaba ha noqotee, si loo gaaro kalsoonida, waa in la ilaaliyaa oo si sax ah loo maareeyaa. Tani waxay xaqiijin doontaa nolol adeeg dheer leh, ka hortagga arrimo badan oo caam ah ...
Jingnai Makiinado waa shirkad cilmiyaysan iyo tiknoolajiyadeed oo isku dhafan R&D, wax soo saar iyo ganacsi. Shirkaddu waxay ku taal magaalada Liaocheng, gobolka Shandong. Waxaan bixin karnaa tayada P0 tayada leh (Z1V1), P6 (Z2V2), P5 (Z3V3). Shirkaddu waxay kasbatay ISO9001: 2008 iyo IATF16949: nidaamka 2016 ...
Waxaa jira waxoogaa jahwareer ah oo ku xeeran xiriirka ka dhexeeya saxda saxda ah ee culeyska, dulqaadkeeda wax soo saarkeeda iyo heerka nadiifinta gudaha ama 'ciyaarta' ee u dhaxeysa waddooyinka tartanka iyo kubadaha. Halkan, Wu Shizheng, oo ah agaasimaha maamulka ee khabiirka yar yar iyo kan yar JITO Bearings, ayaa daadanaya ...
Abriil 23-27, 2019, shirkadeena ayaa ka qaybqaadan doonta Bandhigga Ganacsiga ee Gawaarida Gawaarida ee Brazil (Sao Paulo). Booth No: P156 Ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Laga soo bilaabo Sebtember 19-keeda illaa 22-keeda 2018, Shirkaddayadu waxay ka qayb geli doontaa Bandhigga Warshadaha Caalamiga ah ee Shiinaha ee ku yaal Shanghai, Booth No waa E251, soo dhaweyso macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Laga soo bilaabo Nofeembar 28th ilaa Diseembar 1th ee 2018, shirkadeena waxay kaqeyb qaadataa Automechanika Shanghai, Booth No. 1H91.ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Laga soo bilaabo Nofeembar 28th ilaa Diseembar 1th ee 2018, shirkadeena ayaa kaqeyb qaadata Automechanika Shanghai ， Booth No. 1H91.ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Laga bilaabo Nofeembar 27th ilaa 30th ee 2018 shirkadeena ayaa ka qeyb qaadan doonta bauma CHINA 2018, Booth No waa N5.691.ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.